Ọrịa ogbu na nkwonkwo | Nchoputa, Oria na Ọgwụ
24 / 06 / 2020 /i rheumatism /av ewute
Nnukwu ntuziaka maka ọrịa ogbu na nkwonkwo nke Autoimmune
Kedu ihe bụ ogbu na nkwonkwo autoimmune? N'isiokwu a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị ogbu na nkwonkwo a - ebe usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-awakpo nkwonkwo.
Ọrịa ogbu na nkwonkwo nke onwe bụ aha otu nyocha dị iche iche nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-awakpo onwe ya - yana nkwonkwo ya. Onye kacha ama ama anyị bụ ndị Norway bụ ọrịa ogbu na nkwonkwo. Mgbe usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-awakpo njikọ ahụ nke ahụ, mmeghachi omume mkpali ga-eme. Nke a mbufụt n’aka nke nwere ike ime ka nkwonkwo mgbu, siri ike na ike na-akpụ akpụ. Enwere ihe karịrị ụdị 100 dị iche iche nke ọrịa ogbu na nkwonkwo - nke nyocha dị iche iche nwere ike ịkpata mgbaàmà dị iche iche. Ọrịa ogbu na nkwonkwo na ọrịa ogbu na nkwonkwo bụ ihe atụ abụọ kachasị na-arịa ọrịa ogbu na nkwonkwo.
N’isiokwu a, anyị na-akụzikwu gị ihe gbasara ọrịa oria na-arịa autoimmune. Tinyere ihe ndị ọzọ, anyị ga-agabiga:
Ọdịiche dị iche iche nke ọrịa ogbu na nkwonkwo Autoimmune
Mgbaàmà nke Ọrịa ogbu na nkwonkwo Autoimmune
Ihe Ndị Na - akpata Ewu Nsogbu Maka Developzụlite Ọrịa ogbu na nkwonkwo
Ọgwụgwọ ọrịa ogbu na nkwonkwo nke Autoimmune
Aro maka mmega ahụ na mmega ahụ na Autoimmune ogbu na nkwonkwo (gụnyere Vidiyo)
Nsogbu ogologo oge
Pesdị Ọrịa ogbu na nkwonkwo Autoimmune
N'ebe a, anyị gafere n'ụfọdụ ụdị ọrịa arthritis na-agbakarị.
Ọrịa ogbu na nkwonkwo: Formdị kachasị na-arịa ọrịa autoimmune nkwonkwo. Nchọpụta a na - ebute ọzịza na mgbu n'aka, aka na ụkwụ ya, yana ikpere ka ọnọdụ ahụ na - akawanye njọ. Nchoputa egosiputala na ihe ruru pacenti iri asaa na asaa bu oria a buru ndi inyom.
Ọrịa ogbu na nkwonkwo: A maara Psoriasis dị ka ọnọdụ akpụkpọ, nke akpụkpọ ya na-eme ka e nwee ọdịdị na-acha ọcha ma na-egosipụta. Ihe ruru n'etiti 20-40% nke ndị nwere ọrịa a na-arịa ọrịa nwere nkwonkwo metụtara ya nke a na-akpọ psoriatic ogbu na nkwonkwo. Nke ikpeazụ a nwere ike imetụta nkwonkwo ahụ niile, gụnyere spain, ikpere, mkpịsị aka, mkpịsị ụkwụ, hips na ubu.
Ọrịa ogbu na nkwonkwo: Ọrịa ogbu na nkwonkwo na-eme naanị na ndị nwere akụkọ ihe mere eme nke ọrịa nje - dị ka Salmonella, Campylobacter na Chlamydia. Nchoputa a nwere ike, na mgbakwunye na mgbu mgbu, na-akpata anya uhie, ihe mgbu mgbe urinating na / ma ọ bụ ọkụ ọkụ n'okpuru ụkwụ ma ọ bụ n'ọbụ aka.
Spondyloarthritis Axial na Ankylosing Spondylitis: Na-enye nkwonkwo akwara nke akwara onwe ya, nke na-ejikọ nwayọọ nwayọọ, na-akpata ma ihe mgbu ma isi ike na nkwonkwo.
Ọrịa ogbu na nkwonkwo (Juvenile Idiopathic ogbu na nkwonkwo): Dị ka aha ahụ pụtara, ụdị ọrịa ogbu na nkwonkwo ahụ na-emetụta ụmụaka na ndị nọ n’oge uto. Nchọpụta ahụ nwere ike inye mgbaàmà ndị dịka nkwonkwo mgbu, ọnya ihu, ahụ ọkụ na ọnya.
Ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo: Raredị ọrịa ogbu na nkwonkwo na-enye akụkụ ma ọ bụ ọrịa ogbu na nkwonkwo nke na-apụ na nke ya. Nchọpụta ahụ na-emetụ mkpịsị aka, aka na ikpere. Omuma ihe otiti gụnyere ihe mgbu, ọzịza, isi ike na ahụ ọkụ.
Nke ọ bụla n’ime nsogbu ndị a dị n’elu anyị kwuru n’elu nwere ike ibute ma mgbu na ikuze nke nkwonkwo.
Ihe mgbaàmà nke ọrịa ogbu na nkwonkwo autoimmune ga-adịgasị iche dabere na nchọpụta ọrịa ogbu na nkwonkwo kpọmkwem. Mana ebe a, anyị na-agabiga ọtụtụ mgbaàmà - nke gụnyere ihe ndị a:
Ihe omuma atu nke oria di otutu enthesitis. Nke a bụ ihe mgbaàmà na-adịkarị na ọrịa ogbu na nkwonkwo psoriatic, nke pụtara na enwere mpaghara nwere nrụgide ebe akwara na akwara na-ejikọ ọkpụkpụ. Nke a nwere ike ịbụ, dịka ọmụmaatụ, jikọtara na akwara Achilles na azụ ikiri ụkwụ ma ọ bụ n'azụ ikpere aka (na triceps).
ihe ize ndụ ihe
Ihe egwu maka ọrịa ogbu na nkwonkwo autoimmune na-adabere n'ụdị ogbu na nkwonkwo nke onye ahụ na-emetụta. Otú ọ dị, enwere ihe ndị na - eme ka ohere nke ịrịa ọrịa ogbu na nkwonkwo na - - dị ka mkpụrụ ndụ ihe nketa na akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ nke rheumatism.
Ọtụtụ hụkwara na epigenetics nwere ike rụọ ọrụ dị n'etiti. Ihe ndi ozo, achoputala ihe ndi ozo di ndu:
Exposurehụ nsị na mbido (dịka nsi anwụrụ anwụrụ nwata)
Mụ nwanyị nwere ihe dị ka okpukpu atọ n’ihe ize ndụ nke ibute ọrịa ogbu na nkwonkwo. N'aka nke ọzọ, ụmụ nwoke nọ n'ihe ize ndụ dị elu nke inweta spondylitis ankylosing.
Onye dibia rheumatologist, ya bu okachamara nke dibia bekee na dibia rheumatology, na - enyocha oria akwara. Nyocha nke rheumatological ga-ebu ụzọ jụọ ajụjụ banyere mgbaàmà ya, gụnyere ihe na-eme ka ọrịa ahụ ka njọ ma ka mma. A nwekwara ike jụọ gị gbasara akụkọ gbasara ọrịa. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-eme ọtụtụ ule iji chọpụta ihe gbasara ahụike mmadụ na nkwonkwo ahụ metụtara.
Ule nyocha a nwere ike ịgụnye:
Nchọpụta nyocha (X-ray, CT ma ọ bụ MRI iji nyochaa ahụike nkwonkwo)
Nyocha ọbara (gụnyere nnwale maka ọrịa rheumatic, ụfọdụ mgbochi na belata)
Tissue biopsy (enwere ike iji ya maka psoriasis gosipụta nchoputa)
N'ebe a, ọ dị mkpa ịkọ na ọ dịghị otu ule nwere ike ịmata ọrịa ogbu na nkwonkwo autoimmune. Usoro a gụnyere ụdị mwepu - ebe mmadụ ji nwayọ chọta nchoputa ya na ihe puru ime. Usoro nyocha dị otú ahụ nwere ike n'ọtụtụ oge were ogologo oge.
Dọkịta gị ga-atụle ọtụtụ ihe tupu ịtọlite ​​usoro ọgwụgwọ ọgwụ maka ọrịa ogbu na nkwonkwo autoimmune. Ọrịa Hen ga-enyocha mgbaàmà gị, ụdị ọrịa ogbu na nkwonkwo ị nwere na ahụike zuru oke - tupu ị kpebie usoro kachasị mma. Ọgwụ ọgwụ na -ejikọtara ya na ọgwụgwọ anụ ahụ na ọzụzụ maka nsonaazụ kacha mma.
ọgwụ ọjọọ eme ihe
Ndị nwere ụdị ọrịa ogbu na nkwonkwo na-adịghị mma nwere ike inwe mmetụta dị mma na ị takingụ NSAIDS naanị. Dị ka Ibuprofen.
Ndị ọzọ aghaghị ịgbanwe gaa ọgwụ ndị ka sie ike, ndị a na-akpọ DMARDS - dị ka methodextrate. Ọ bụrụ na DMARDS anaghị arụ ọrụ, mgbe ahụ ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị ịnwale ihe a maara dị ka ọgwụ ndu. Ihe ndị a na-egbochi sistemụ nkwurịta okwu nke sistemu ji alụso ọrịa ọgụ. Ọ dị mkpa icheta na DMARDS na nkà mmụta ọgwụ na-ahụ maka ọgwụ na-egbochi ahụ ike (ha na-ebelata usoro nchebe nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, ma na-eme ka onye ahụ na-eburu ha ihe na-ebute ọrịa na mbufụt).
Dịka e kwuru na mbụ, mmadụ ga-achọ ijikọta ọgwụgwọ ọgwụ na ọgwụgwọ anụ ahụ - yana mmezigharị nri ya. Nke a nwere ike ịgụnye:
Nri oriri na-egbu egbu
Nlekọta na Nduzi Nkuzi na Onye Nlekọta Ahụike Ezigbo ikike na Ọkachamara na Olupụta Ahụ na Ọkpụkpụ Ahụ (Ọkpụkpụ anụ ahụ, Chiropractor ma ọ bụ Akwụkwọ ntuziaka ntuziaka).
Mkpesa mkpakọ (wdg uwe mkpakọ ndị a)
Smokingkwụsị ise siga
Mmega ahụ na ọdọ mmiri mmiri
Comprehensivezọ zuru oke n'ọgwụgwọ ọrịa ogbu na nkwonkwo dị mkpa iji kwalite nsonaazụ kacha mma. Ke ibuotikọ emi ya Nwere ike gụkwuo gbasara nri mgbochi mkpali. Imega ahụ mgbe niile dịkwa mkpa iji mee ka ọrụ dị mma na ịgbanye ọbara. Vidio dị n'okpuru ebe a na-egosi ọmụmaatụ mmega ahụ eji arụ ọrụ iji lụ ọgụ osteoarthritis n'aka gị:
VIDIO: Usoro Omume Na-emegide Aka Osteoarthritis
Soro ezinụlọ anyị! Idenye aha na n'efu na ọwa youtube anyị (pịa ebe a) maka mmemme mmega ahụ na vidiyo ahụike.
Nkwado maka enyemaka onwe onye maka Ogbu na nkwonkwo
mkpakọ Noise (dị ka mkpakọ sọks na-eme ka ụba ọbara ekesa akwara ma ọ bụ pụrụ iche na-emegharị mkpakọ uwe og sọks megide rheumatic mgbaàmà na aka na ụkwụ)
Mkpịsị ụkwụ ụkwụ (ọtụtụ ụdị nke rheumatism nwere ike ime ka mkpịsị ụkwụ gbagọrọ agbagọ - dịka ọmụmaatụ mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ hallux valgus (ukwu ukwu ụkwụ)
Ogologo oge nsonaazụ akpịrịiki na-adabere na ụdị dịgasị iche iche onye ahụ na-arịa. Ihe omuma atu putara ihe bu oria rheumatic o nwere ike ibute oria n’aka na ukwu. Tinyere ihe ndị ọzọ, onye anyị hụrụ n'anya bụ Jahn Teigen nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo, mgbanwe ndị a na nkwonkwo gara aga karịa ọrụ ya kwa ụbọchị. Nchọpụta egosipụtakwala na ndị nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo nọ n'ihe ize ndụ ka ukwuu nke ọrịa obi na ọrịa shuga na-emetụta.1). N'ọnọdụ ndị na-adịkarịghị, mmebi nkwonkwo nwere ike ịdị oke njọ nke na ọ chọrọ ịwa ahụ - dịka ikpere ma ọ bụ mgbatị hip.
Onye nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo na-agabiga oge mgbu na ọzịza. Ihe ndị a nwere ike ime ka o sie ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ na-elekọta mmadụ n'otu ụzọ ahụ dị ka ọ dị na mbụ. Iji zere nsogbu, ọ dị mkpa ịnweta nyocha na nyocha n'oge - ka onye ahụ wee nweta ezigbo ọgwụgwọ na ọgwụgwọ anụ ahụ.
Nchoputa mbu di nkpa
Ọgwụ kwesịrị ịke ọfụma na usoro ọgwụgwọ (ọgwụ, ọgwụgwọ anụ ahụ, mmega ahụ, mmega ahụ na nri gị).
Mgbe nile iji mkpakọ mkpọtụ nwere ike ịba uru maka ijigide mgbasa.
Nsogbu ndi ga-adi ogologo oge nwere ike gabighari ojuju nke Job na oru oma ubochi obula
Ajụjụ? Nwere onwe gị ịpị ha na ngalaba ihe n'okpuru. Ma ọ bụghị ya, anyị na-akwado gị ka ị sonyere ndị otu nkwado anyị: Rheumatism na Ahụhụ Ọrịa - Norway: Nnyocha na Akụkọ. N'ebe a, ị ga - achọta ozi bara uru ma nwee ike ịchọ nnukwu nchekwa data anyị nwere ajụjụ mbụ. Anyị na-atụ anya ịhụ gị ebe ahụ.
Ọrịa ogbu na nkwonkwo nke seronegative Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Sacroilitis [Nnukwu Nduzi]